Nnukwu sdị nwere Nsogbu, Ube Nwere Ihe Ngwọta | Martech Zone
Ma ọ bụ biya, nri ma ọ bụ ọrụ, ọtụtụ mmadụ na-achọta ngwaahịa na ọrụ dị mma ha chọrọ na mpaghara. Na nri naanị, ọ na-eme atụmatụ na nnukwu ahia efuola ihe ruru ijeri $ 18 n'ahịa gaa n'ugbo na ụlọ nri. Wezụga nsogbu dị mma, ndị na-azụ ahịa chọkwara inwe mmetụta dịka dollar ndị ha na-emefu na-eme nnukwu ọdịiche n’obodo ha.
Nzube-chụpụrụ ahịa na ụdị mmekọrịta dị iche iche na-aghọ ebe nkịtị dịka 80% nke ndị na-azụ ahịa kwenyere na ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ na-eme ka ha mara mbọ ha na-agba iji dozie nsogbu obodo. Otu ụlọ ọrụ itinye ego na mpaghara na-aghọ ihe dị ezigbo mkpa karịa metrik, coupon ma ọ bụ coupon telivishọn na-esote.
Brandsdị ndị buru ibu na-agbanwe ma na-agbanwe ahịa ahịa ha iji nwee njikọ bara uru na ndị na-azụ ahịa bụ ndị ji njikọ aka dị egwu. Anyị dere banyere otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ inye ụmụ klas ebe ahụ ihe ndị ha chọrọ na post akpata ahịa. Brandsdị nnukwu na-atụgharịkwa na mkpọsa ahịa ahịhịa na-etinye ndị obodo ahụ aka ma rute ndị na-azụ ihe n'otu ọkwa.
N'ezie, nsogbu dị bụ otu ụlọ ọrụ nwere ike ịchọta, jikwaa, ma hụ na ọganiihu na mbọ ndị obodo na-eme. Imirikiti nnukwu ụlọ ọrụ enweghị mbọ iji zipụ obodo niile ma mee ọfụma… yabụ na-abịa Ube iji nyere ha aka ijikwa nke a!
Ube na-eme ka nkwado dị mfe maka otu na ihe omume nke ụdị na nha niile. Chọta onye nkwado na ihe erughị 60 sekọnd ma mee ka obodo gị kwalite ihe ruru $ 1,000 ma ọ bụ karịa na uwe elu ọdịnala, onyinye ego, ngwaahịa na ọrụ ma ọ bụ nri na nri sitere na akara mba ma ọ bụ azụmaahịa mpaghara dị gị nso.
Ihe Omume nke Ube
US cellular US na-enye ego maka ndị ntorobịa nọ na mpaghara dịka ndị otu Little League. Ndị otu a nwere ike irite ihe ruru $ 9 kwa onye iji gbanwere US Cellular site na mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta na mmekọrịta akọwapụtara nke ọma. Ọ bụ mmeri-mmeri maka ụdị abụọ na ndị na-azụ ahịa ha metụrụ aka.
Otu dị iche iche na-enweta nkwado ha chọrọ na US Cellular na-eburu n'uche maka ezinụlọ mgbe ha na-enyocha ndị na-ebu ikuku. Nnukwu ụdị dị mkpa iji nwee njikọ bara uru na ndị obodo ma rute ndị na-eri ihe n'otu ọkwa ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya ịlanarị ma nwee ọfụma na ndị ahịa akọ na uche… Ube bụ nnukwu azịza.
Tags: mara amaraakpata ahịaụlọ ọrụ mpaghara ahịaubeube nkwado obodopearupna-enye gị nkwadonzube ahịa
Mmetụta Ahịa nke Nke Mbụ na Nke Data nke Atọ